Maamulka Gobolka Bakool oo sheegay inay bilaabeen howl gal ka dhan ah Al-Shabaab – STAR FM SOMALIA
Maamulka Gobolka Bakool oo sheegay inay bilaabeen howl gal ka dhan ah Al-Shabaab
Maamulka Gobolka Bakool ayaa sheegay inay bilaabeen howl gal ka dhan ah Kooxda Al-Shabaab ee ku sugan deegaanada qaar ee ka tirsan gobolkaas.
Guddoomiyaha Gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool ayaa sheegay in howl galkan ujeedkiisa yahay sidii Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada ay ku harsan yihiin, isuna furi lahaayeen wadooyinka ay jareen.
“Howl galo la isugu furayo wadada isku xirta Bay iyo Bakool ayaa socda, kooxaha nabad diidka waxaa ka saareynaa meelaha ay ku dhuumaaleysanayaan”ayuu yiri Guddoomiyaha Gobolka Bakool.
Waxaa uu sheegay in deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo AMISOM diyaarado loogu keeno saanada iyo sahayda.
Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa shalay la wareegay deegaano ka tirsan degmada Xudur, waxaana ujeedka howl galka uu yahay sidii go’doonka ay ku jirto Xudur looga qaadi lahaa.
Al-Shabaab ayaa go’doomiyay deegaano badan oo horay ay ula wareegeen ciidamada dowladda iyo AMISOM, waxaana deegaanada qaar ka jira xaalado bani’aadanimo iyo sicir barar ku yimid maciisha.